Nei katsi dzichidya katsi dzadzo dzichangozvarwa? | Noti Katsi
Nei katsi dzichidya katsi dzadzo dzichangozvarwa?
Icho chokwadi chekuti kuva nekati ine nhumbu chinogara chiri chikonzero chemufaro, kunyanya kana vana vadiki vakwanisa kuiswa mudzimba dzakanaka vasati vazvarwa (chimwe chinhu icho, nenzira, chinofanirwa kuzadzikiswa kudzivirira matambudziko gare gare). Asi dzimwe nguva zvinhu hazvifambe nenzira yatinotarisira.
Unogona kunge uine dhirivhari yakanaka, asi kana usiri kunyatsogadzikana, zvakaipisisa zvinogona kuitika. Saka kana iwe wakambozvibvunza seikatsi dzinodya kitsi dzadzo munguva pfupi yapfuuraMukuzvarwa, inotevera ndichaenda kukuudza nezvehunhu uhu hunoshamisa.
2 Vechidiki vanozvarwa vasina simba
3 Kushaikwa kwehunhu hwamai
4 Haazive vana vavo
5 Feline mastitis
6 Kunzwa kutyisidzirwa
7 Maitiro anojairika asi zviratidzo zvekunyevera
7.1 Fambisa makiti zvakanyanya
7.2 Ramba kitsi
7.3 Regedza mboro dzake
7.4 Mboro ine hukasha
8 Zvekuita kana amai vakadya kitsi dzavo
Icho chimwe chezvikonzero zvakajairika. Vanhu vanonamata kitsi, kunyanya vana, patinoona marara e kitsi tinoda kuibata, kuichengeta, kuva navo ... Uye ndizvo chaizvo zviri Katsi zvaasingade. Iye anoda kudzikama, ari pamubhedha wake, uye kutarisira mwana wake ari oga. Yakagadzirira izvo. Hazvidi vanhu kana dzimwe mhuka dzine mvere kuti dzive amai.
Neichi chikonzero, zvakakosha zvikuru kukupa iwe nzvimbo yakachengeteka, sekamuri uko vanhu vasingaendi, tsanangurira mhuri kuti vanofanirwa kuremekedza katsi nevana vayo, uye pamusoro pezvose, chengetedza dzimwe mhuka kure naye, kana paine.
Vechidiki vanozvarwa vasina simba
Kana mukadzi, werudzi rupi zvarwo, akadya mhuru yake inorwara kana isina kusimba, anozviita nechikonzero chakanaka: mune zvakasikwa zvaisazorarama uye, nekudaro, iwe hauzodi kushandisa simba mukuzvichengeta. Zvakaoma, asi ndozvazviri. Iyo katsi, kunyangwe ikagara mumusha wakanakisa pasirese, inotevedzera hunhu hwayo.
Uye ndezvekuti, kunyangwe vanhu vachigona kuponesa hupenyu hwehuturu hwakashata, vedu vadikani furry havazvizive. Saka, zvinokurudzirwa kuti uzive kuendesa, kana paine chero vadiki vakaberekwa zvakashata.
Kushaikwa kwehunhu hwamai
Dzimwe nguva zvinoitika ndezvekuti, zvakapusa, mboro haina kana basakuchengeta vana vavo. Zvinogona kuitika kana iwe uri amai vatsva, kana iwe wave kuda kuve nekupisa zvakare, kana kana iwe wakanzwa kushushikana panguva yekuzvitakura uye / kana pakuzvara semuenzaniso.
Nokudaro, kuchengetedza kittens dzakawanda kwazvo unofanirwa kucherechedza maitiro avo nadzo. Kana tikaona kuti vari munjodzi, tichavaparadzanisa naamai uye tinozovachengeta (in ichi chinyorwa tinotsanangura sei).
Haazive vana vavo
Izvo zvinoitika mukitsi idzo dzave kuda a Chikamu cheKesariya Semuyenzaniso. Uye ndezvekuti panguva yekusununguka kwepanyama muviri unoburitsa oxytocin, inova hormone iyo inokurumidza kuita kuti unzwe kuda vana vako uye kuda kuvadzivirira; Asi zvirokwazvo, mushure mekuvhiyiwa izvi hazviwanzo kuitika, saka zvinogona kuitika kuti iwe uone kittens dzako asi usingadzizive.
Neichi chikonzero, uye kudzikisa njodzi yekudyiwa, dzivisa kuvashandisa zvakanyanya sezvinobvira sezvo hwema hwevanhu hunobvisa iyo yekatsi, izvo zvinoita kuti zvinyanye kumunetsa kuti azvione seyake.
La mastitis chirwere chinobata maronda ezvipfuva zvemarudzi akasiyana siyana emhuka dzinoyamwisa. Zvinokonzera kurwadziwa kwakawanda kana vachiedza kuyamwa, zvakanyanya zvekuti zvinogona kutungamira amai kuti varambe vana vavo uye kunyange kuvauraya kuti vasanzwe.
Kana ikasarapwa inourayaNekudaro, zvakanyanya, zvakakosha kuti uende naye kuna vet nekukurumidza.
Iyo mai katsi inogona kunzwa kutyisidzirwa nedzimwe mhuka, kusanganisira mhuka dzinovaraidza idzo amai katsi dzaive dzakagadzikana napo kare, asi ikozvino zvaave nevana, haachanzwi akachengeteka zvakadaro. Iwe unogona zvakare kunzwa kuti vanhu vakakukomberedza vari kutyisidzira.
Kamwe kittens padzinosvika pazera rekurumura, iyi inowanzo iri nguva iyo pavanogona kuunzwa kune dzimwe mhuka dzepamba nevanhu. Izvo zvinodikanwa kuti uzviite zvishoma nezvishoma kuti urege kuisa panjodzi kitsi. Asi vasati vagadzirira kurumura, ino haisi nguva yakanaka yekuvasuma kwauri. nekuti kana amai vachinzwa kutyisidzirwa vanogona kupedza hupenyu hwevacheche vavo.
Maitiro anojairika asi zviratidzo zvekunyevera
Kune mamwe maitiro mune amai katsi izvo, kunyangwe zviri zvakajairika, izvo zviratidzo zvekuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka uye kuti amai vanogona kupedza hupenyu hwevati vavo nekuda kwekunetseka kana kusagadzikana. Mupfungwa iyi, zvichave zvakakodzera kutarisisa maitiro avo kudzivirira izvi kuti zviitike.
Fambisa makiti zvakanyanya
Iyo mai katsi inokwanisa kufambisa kiti dzayo kazhinji. Ichi chingave chiratidzo chekuti haunzwi wakachengeteka kwachiri. Kana iwe ukaona kuti ari kunzwa kusagadzikana, zvakanakisa kumupa iye nzvimbo kwaanonzwa kuvharidzirwa, akadzivirirwa nekiti dzake, uye asingavhiringidzwe nemunhu.
Vamwe amai katsi vanogona kuramba marara avo kana imwe yekatsi dzavo. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti izvi zviitike zvinogona kunge zviri zvekuti vanhu vari kubata katsi zvakanyanya kana kuti vane hurema hwekuzvarwa. Mupfungwa iyi, zvichave zvakafanira kudzora kudyidzana nekiti kudzamara vangangoita mavhiki mana ekuberekwa (kunze kwekunge hupenyu hwavo huri munjodzi nechimwe chikonzero).
Regedza mboro dzake
Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti amai katsi vanoregeredza kitsi dzavo, uye izvi hazvina kufanana nekuzviramba. Pamwe zvinonzwa pavari, kuti hazvivabvumidze kuti vadye ... iyi inogona kunge iri mhinduro kune nharaunda. Mupfungwa iyi, zvichave zvakafanira kudzikisira kudyidzana kwevanhu nekiti. uye katsi uye nekucherechedza mafambiro ake maitiro.
Mboro ine hukasha
Hasha dzinogona kuoneka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, kunyangwe zvinowanzoitika nekuti katsi inonzwa kutyisidzirwa neimwe nzira. Iyo katsi inogona kuhukura kana kurwisa dzimwe mhuka kana vanhu vanouya kumakiti avo kuti vadzivirire, kana ikaona kuti hazvibviri kuvadzivirira kana kunzwa kuti tyisidziro ndeyechokwadi, ipapo inogona kudya marara ayo. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti ubvumire kati kuti inzwe yakachengeteka nguva dzese. Kucherekedza kati uri kure kunongovhiringidza kana vacheche vake vachida rubatsiro rwechimbichimbi.
Zvekuita kana amai vakadya kitsi dzavo
Zvinogona kuve zvinotyisa kutarisa amai vachidya kittens dzavo, asi zvakakosha kuti iwe ugare wakadzikama. Dzivisa kunyanyisa nekuti izvozvo zvinongowedzera mamiriro acho ezvinhu. Panzvimbo pekuramba kati, nzwisisa kuti nei akazviita pakutanga. Kazhinji katsi ine chikonzero chekuzviita, kunyangwe iwe usiri kuda kuchiona.
Kunzwisisa zviri kuitika naamai nekiti idanho rekutanga mukutarisana nedambudziko. Kana iwe ukaona kuti imwe yekatsi isina kusimba uchafanirwa kudzikisa mutengo wetsvina kudzivirira amai kuidya. Iwe uchafanirwa kumupa chikafu uye nekumuchengetedza akachengeteka nguva dzese. Rangarira kuti kana uchifanirwa kupatsanura katsi kubva kuna amai vayo, iwe uchave unoona nezve katsi yemucheche kusvikira yagona kuzvidya yega.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakabatsira kwauri, asi, pamusoro pezvose, izvo usaone kati yako ine maziso akashata kana kumuramba. Funga kuti anongoshanda pane zvakasikwa, hapana chimwezve. Tsvaga kuti sei vadiki vachidyiwa kuitira kuti ugone kuzvidzivirira kuti zvisaitike zvakare. Zvisinei, regai ndikurangaridzei kuti kana musingakwanise kuchengeta vana vadiki, uye kuyedza kudzora kuwanda kwekatsi, rakanakira kumukanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Nei katsi dzichidya katsi dzadzo dzichangozvarwa?
Katsi yangu yauraya vana vayo vana nhasi Chitatu 18'3'2020 pandakasimuka kuti ndipe mai vake chikafu ndakaona misoro mina yehuku pasi petsoka dzangu uye ndisingazvitendi ndakaramba ndichimhanya kukamuri yaive muyadhi yangu kure nemba uye ndaigona kungoona mitumbi mina isingazivikanwe kune zvayaive pakutanga. chokwadi ndechekuti ndinofunga imhosva yangu yaive mhosva yangu yese nekuti ndanga ndaneta zvikuru uye ndakarara mu moche uye ndakanganwa kuvapa chikafu chavo uye ndinofunga ndosaka ndichivauraya kana ndichiziva kuti ndinotyisa kutora kuchengetwa kwemhuka zvisinei nekuti dzinovachengeta sei, kana kuti vane rudo rwakadii rwunoguma rwakafanana.
Pindura kuna yariel
Usazvitambudza. Nguva dzose siya ndiro izere nechikafu, uye ndizvozvo. Saka haufanire kunge uchiziva zvakadaro.
Bianca villalba akadaro
Katsi yangu yakadya katsi 1 pasina mwedzi asi katsi yacho yakazvarwa ichirwara, yaisagona kufamba zvakanaka yakairega ichikura kusvika nguva yayo yekupedzisira payakamira kufema yakaidya.
Pindura kuna Bianca Villalba
Ugh, zvakaoma zvikuru. Asi dzimwe nguva zvinoitika.
Kutaura zvazviri, chakaita zvingaitwa nemhuka chero ipi zvayo. Zvinosuwisa, asi vasina simba kana kuti vanorwara havagoni kurarama, kutoti munhu anogona kuvatarisira, hongu.
Maitiro ekusarudza uye chengetedza sofa kana uine katsi
Sei katsi yangu isiri kukura?